Miditra amin'ny vanim-potoanan'ny fety i Myanmar hanamarihana ny fiafaran'ny Karemy Buddhist
Home » Travel Associations News » Miditra amin'ny vanim-potoanan'ny fety i Myanmar hanamarihana ny fiafaran'ny Karemy Buddhist
Volana fankalazana sy fankalazana ny volana septambra Myanmar, izay mahatonga azy io ho fotoana tsara hitsidihana ny firenena Azia atsimo atsinanana. Rehefa miomana hiditra amin'ny faran'ny Karemy Buddhist ny Buddhists Myanmar, dia miomana amin'ny fety maro ny vondrom-piarahamonina manerana ny firenena izay hahita ireo mponina avy amin'ny faritra rehetra miakanjo akanjo tsara indrindra, manao hazakazaka sambo, manome elefanta mitovy habe amin'ny fiainana saribakoly sy filalaovana jiro solika an-tapitrisany maro - hatao ny volana septambra ka hatramin'ny fiandohan'ny volana oktobra izao. Ny fotoana koa dia mifanojo amin'ny faran'ny vanim-potoana maitso, miantoka ny tontolon'ny ravina mirary, ny mari-pana tonga lafatra amin'ny 25-30 degre Celsius ary ny fifampiraharahana tsara indrindra amin'ny fifanarahana trano fandraisam-bahiny.
Mifanaraka amin'ireo fankalazana ho avy, Myanmar Marketing Marketing dia nandefa kalandrie hetsika tao amin'ny pejiny Facebook tao amin'ny https://www.facebook.com/pg/myanmartm/events, izay ahafahan'ny besinimaro mahazo vaovao misimisy kokoa momba ny fety sy ireo toerana mahaliana. Ny kalandrie koa dia manome fitarihana ara-potoana amin'ny fety, izay isaina mifototra amin'ny Myanmar tetiandro amin'ny volana ary noho izany dia mety tsy ho takatra amin'ny fomba hafa raha tsy izany. Ny pejy dia havaozina isan'andro ary ampiasaina ho toy ny torolàlana mahasoa sy azo ampiharina amin'ny mpandeha. Mizara vaovao tsy tapaka momba ny fivoaran'ny sehatry ny fizahantany ao amin'ny Myanmar miaraka amin'ny horonan-tsary, sary, bilaogy fitsangatsanganana ary tantara maro hafa.
“Na eo aza ny fitomboan'ny isan'ny mpizahatany tato ho ato Myanmar, ny isan'ny mpizahatany any ivelany izay mitsidika toerana toa an'i Bagan na Inle Lake dia olona 280,000 XNUMX fotsiny isan-taona, noho izany dia betsaka ny toerana ahafahana mandray mpizahatany maro kokoa. Amin'ny fametrahana kalandrie amin'ireo hetsika tsy manam-paharoa ireo ao amin'ny Facebook, manantena izahay fa hanampy ireo mpizahatany sy ireo mpitsidika hafa amin'ny drafitra ny diany mankany na manodidina Myanmar, "Hoy izy Ma May Myat Mon Mandresy, Lehiben'ny Marketing amin'ny fizahan-tany any Myanmar.
Ny sasany amin'ireo fety ho avy ao Myanmar ahitana:
Fetiben'ny Pagoda Manuha (Bagan, 4 - 6 septambra 2017)
Manuha Pagoda Festival dia atao mandritra ny telo andro manomboka amin'ny iray andro alohan'ny Full Moon Day of Tawtalin (tsy mitovy ny daty arakaraka ny Kalandrie Myanmar). Ny mponina ao amin'ny Faritra Myinkaba dia manome mofom-bary sy amponga melonà ririnina ho an'ireo mpitsidika mandritra ny festival. Ity fomba fanao nentim-paharazana ity dia voalaza fa nidina tamin'ny andron'ny Mpanjaka Manuha ary mbola hita eo amin'ny fetibe ankehitriny. Ireo moanina dia mivory mandritra ny fety mba handray fanomezana amin'ny lovia fiantrana be manodidina ny Pagoda. Ny fifaninanana tarehimarika papier-mâché miloko dia tanterahina mandritra ny Fetiben'ny Manuha Pagoda ary ho hitanao ny diabe miloko manodidina ny tanàna amin'ny endrik'ilay Mpanjaka Manuha tenany, tigra, omby, elefanta, soavaly, sns.
Phaung Daw Oo Pagoda festival (Inle Lake, 21 septambra - Oktobra 8, 2017)
Fetibe mahatalanjona izay ahitan'ny sambo manana mpitaingina tongotra 50 na 60 miakatra sambo mitondra sary masina avy any amin'ny tanàna iray mankany amin'ny tanàna hafa. Ny fandaharam-potoana marina dia matetika vao fantatra herinandro vitsivitsy mialoha ary misy foana ny "andro fitsaharana". Miezaha ho ao anaty sambo tsy miankina amin'ny farihy ary angataho amin'ilay mpamily sambo hanontany hoe aiza no handalovan'ilay filaharana ary azonao antoka fa hanao sary mahafinaritra amin'ity filaharana ity ianao. Fetibe mahafinaritra ny mitsidika na dia somary be olona aza. Mikasa ny hanana roa andro ao amin'ny Inle Lake hahazoana antoka fa tsy ho diso ny dian'ny filaharana ianao.
Fetibe elefanta mandihy (Kyaukse, 4 - 6 Oktobra 2017)
Kyaukse, tokony ho adiny telo miala an'i Bagan (halavirana mitovy amin'i Mandalay) dia malaza amin'ny fitafiana elefanta papier-mâché lehibe vita eto. Lehilahy roa manao fitafiana elefanta mampiseho dihy akrobatika eny amin'ny araben'i Kyaukse. Fetibe tsara hijerena ny fiainam-pokontany Myanmar, ary matokia fa tsy misy elefanta tena tafiditra amin'ity festival ity.
Thadingyut - fetin'ny jiro (Manerana ny firenena, 4 - 6 Oktobra 2017)
Ny fiafaran'ny Karemy bodista dia fotoana hanomezana fanajana ny ray aman-dreny, mpampianatra ary ny antitra. Amin'ny andro feno volana amin'ny volana Oktobra (matetika ny antsasaky ny volana Oktobra) dia manazava labozia ny trano sy ny pagoda. Raha any an-tanindrazana ianao amin'izao andro izao, mandrehitra labozia eo akaikin'ny trano fandraisam-bahininao ary mandehandeha eran'ny tanàna amin'ny hariva (na mitsidika ny Shwedagon Pagoda any Yangon raha sendra eo ianao) ary mankafy ny atmosfera majika.
Hisy fety kely kokoa koa (pwe) nalamina tamina tanàna manerana Myanmar, mazàna misy karazana fialamboly, fialantsasatra kely sy sakafo isan-karazany.
Nanomboka ny diany i Thailandy hanadio ireo ranomasimbe Kingdoms